Maamul Gobaleedyada oo Ciidamo la shaqeeya Shariif Xasan u diraya Koofur Galbeed |
Maamul Gobaleedyada oo Ciidamo la shaqeeya Shariif Xasan u diraya Koofur Galbeed
Xog gaara oo ay heleyso Wakaalada Warqaad.com ayaa sheegeysa in Madaxda Maamul Gobaleedyada ay wadaan qorshe ciidamo isku dhaf ah ay ku geynayaan Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobalka Bay halkaasoo ay ka jirto xiisad siyaasadeed oo ka taagan Doorashada Madaxweynaha.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in Shir Magaalada Kismaayo ka dhacay oo ay ka qeyb galeen Masuuliyiin kala matalayay Madaxweynayaasha inay Maamul Gobaleedyada isla meel dhigeen inay taageeraan Shariif iyadoo Madaxda Maamulada Puntland, Galmudug iyo Jubbaland ay isla garteen inay faragalin ku yeeshaan xiisada uu ku jiro Guddoomiyaha Golaha Iskaashiga Dowlad Gobaleedyada Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Xiisada Siyaasadeed ee Koonfur Galbeed ayaa Saacadba saacada ka dambeysa waxa ay noqoneysa mid kor u sii kaceysa,waxaana xalay Magalada Baydhabo ka dhacay kulmo gooni gooni ah oo ay yeelanayaan Musharixiinta iyo Xildhibaanada Koonfur Galbeed qaarkood.
Waqtiga ay Maamul Gobaleedyada u dirayaan Ciidamada Isku dhafka ah Magaalada Baydhabo lama oga laakiin qorshahan waxaa suurta gal inay is hortaagto Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Wararka qaar ayaa sheegaya in guddoomiyaha Baarlamaanka koofurgalbeed uu qorsheynayo in uu shir jaraa’id qabto maanta isagoo ka hadli doono go’aanka baarlamaanka ee la xiriira doorashada Madaxweynaha Koofurgalbeed.